Tirada dadka u dhintay Shuban-biyoodka Burco iyo wararkii u dambeeyay | Berberanews.com
Home WARARKA Tirada dadka u dhintay Shuban-biyoodka Burco iyo wararkii u dambeeyay
Tirada dadka u dhintay Shuban-biyoodka Burco iyo wararkii u dambeeyay
Burco(Berberanews):- 4 Ruux oo laba ka mid ahi ay ka tirsan yihiin Maxaabiista ku xidhan Xabsiga dhexe ee magaalada Burco iyo laba Qof oo kale, ayaa Xalay illaa Gelinkii hore ee Khamiistii Maanta u geeriyooday Xanuunka Shuban-biyoodka oo ka dillaacay magaaladaas.
Afarta Qof ee Xalay illaa Maanta u geeriyooday Cudurka Shuban-biyoodka ee ka dillaacay Burco, waxay Tirada guud ee 8-dii Cisho ee u dambeeyey Burco ugu dhintay Cudurkaasi noqonaysaa 29 Qof oo qaarkood Maxaabiis yihiin; sida uu Laanta Afka Soomaaliga ee Idaacadda VOA uu u xaqiijiyeen Hawl-wadeennada Caafimaadka Cusbitaalka guud ee magaalada Burco.
Isu-duwaha Wasaaradda Caafimaadka ee gobolka Togdheer Dr. Yuusuf Dirir, ayaa VOA u sheegay in 160 Ruux ay Cudurka Shuban-biyoodka u jiifaan Cusbitaalka guud ee magaalada Burco. Inkasta oo uu Isu-duwuhu sheegay in Dawada Shubanku taallo magaalada, haddana Hawl-wadeennada Caafimaadka Cusbitaalka guud ee Burco, ayaa isla VOA u sheegay in Dawooyinka ay Dadka Bukaanka ahi u baahan yihiin qaarkood oollin Cusbitaalka iyo magaalada Toona.
Masuuliyiin Xukuumadda ka socda oo uu ka mid yahay Wasiirka Caafimaadka Somaliland Dr. Saleebaan-Xaglo-toosiye, ayaa gaadhay magaalada Burco oo Xaalad deg-deg ah oo Caafimaad lagu soo rogay. Waxaanay Dawladdu amar ku bixisay inaan Dadka Shubanka u soo dhaca ee Bukaanka ah la geyn karin Goobaha Caafimaadka ee gaarka loo leeyahay, keliyana la keeni karo Xarumaha Caafimaad ee ay dawladdu gacanta ku hayso, si Cudurka faafitaankiisa loo xakameeyo.
Madaxweynaha Somaliland Md. Axmed-Siilaanyo, ayaa intii Shubanku ka dillaacay Xabsiga dhexe ee magaalada Burco, amray in la sii daayo Maxaabiis Lixdan ka badan oo qaarkood Xukunnadooda dhammaysteen, halka qaarna Xukunnadoodu fududaayeen, sida uu Weriye Barkhadka Kaariye ku sheegay Warbixintan. Waxaana laga bilaabay Burco iyo Xabsiga dhexe ee magaaladaas-ba Olo
Previous article“Iyadoo Cudurkaasi jiro Doorasho geli mayno” Gudoomiyaha Guurtida Somaliland
Next articleIn ka badan 40 muhaajiriin ah oo oon ugu dhintay Saxaraha